Mpianatra Bahrainita nahazo ny laharana voalohany miditra am-ponja fa tsy miditra an-tsekolim-pitsaboana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2015 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, မြန်မာ, English
Nilaza tamin'ny gazety mpivoaka isan'andro Al Wasat ny fianakavian'i Mustafa fa niezaka hatrany nandresy lahatra ny manampahefana mba hampihena ny sazy ho onitra ny mpisolovavany, Mohammed Al-Muttawa mba ahafahany hanohy ny fianarany, saingy tsy nahomby.
Efa kandidà tamin'ny Fandaharan'asa Vatsim-pianarana Iraisam-pirenenan'ny Printsy Handova ny Satro-Boninahitra (CPISP) izy ary tafiditra tamin'ny dingana farany saingy tsy nahazo. Natao hanatontosana ny Vinan'ny Printsy Sheikh Salman Bin Hamad Al-Khalifa ny fandaharana vatsim-pianarana araka ny voalaza ao amin'ny habaky ny fandaharana “mba hampivelatra ny tanora Bahrainita avy amin'ny sarangam-piainana rehetra handray toerana manan-danja amin'ny hoavy eo amin'ny seha-panjakana sy ny tsy miankina.”
Tsy irery i Mustafa araka ny fanoritsoritan'ny maro amin'ny “fombam-panavakavahana” raha ny fizarana vatsim-pianarana ao Bahrain no resahina. Misy ny adihevitra mafana mitranga ao Bahrain mikasika ny fepetra fifantenana izay mpianatra mahazo vatsim-pianarana. Araka ny filazan'ny mpikatroka sy ny olom-pirenena Bahrainita, mampiseho fanavakavahana ireo Shiita mpianatra eo amin'ny fanomezana vatsim-pianarana ny tondrozotran'ny governemanta, indrindra hoan'ireo izay maneho fomba fijery manohitra ny governemanta. Natambatra tamin'ny diezy mavitrika tao amin'ny Twitter amin'ny teny Arabo midika hoe “ny famonoan'ny vatsim-pianarana” ny fomba fijery sy ny fahasorenan'izy ireo .
Araka ny antotanisan'ny Foibe Misahana ny Zon'Olombelona ao Bahrain (BCHR) tamin'ny Febroary tamin'ity taona ity, ankizy 400 eo ho eo no any am-ponjan'i Bahrain noho ny fiampangana misy ambadika politika. Iharan'ny fikarakarana ratsy sy ny fampijaliana ny ankamaroan'izy ireo.